Ndakati ndakabata ndokukafongoresa pasofa ndokuiti shweeee nekumashure! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakati ndakabata ndokukafongoresa pasofa ndokuiti shweeee nekumashure!
Ndakati ndakabata ndokukafongoresa pasofa ndokuiti shweeee nekumashure!
Yainge iri weekend ndichangobva hangu kubasa apa ndainge ndakarohwa nenzara yebeche. Babe rangu rainge rayenda Joburg kwaigara sister yake for almost two weeks, taipota tichifonerana husiku ndombotanga kuzvibata bata kusvikira ndatunda.
Chemusi uyu hameno zvaiyitika ndakati manheru after ndabva kuzvibata bata ndakatunda asi mboro haina kurara yakaramba yakamira kunge simbi. Ndakabuda ndikayenda kubasa as usual as mumusoro ndaizvibvunza kuti sei mboro irikuita kunge yakangomira but no answer. Ndakasvika kubasa ndokupedza hangu, ndichiyenda kumba ndakafonera babe rangu ndikamuudza zvaiyitika but not in so many details ndakangoti haa babe ndakusuwa manje chidzoka tisvirane, mwana akaseka mhani ipapo kuita kunge ndataura joke ini nechemumoyo ndaitorevesa.
Ndakati ndichisvika pamba pandaigara ku Avondale paigara vamwe vasikana ma Indians vaive ma students pa UZ. Ndaigara ndichivaona everyday but taingomhoresana chete, mumwe wacho akabva ati ndokumbirawo Nando’s yandainge ndakabata ndikabva ndati huya kuroom kwangu utore ndinokusiira. Akatanga kuseka zvikanzi ichiri Nando’s chete here yaurikuda kundipa, ndokubva ndamuti yes of course chii chimwe. Ndakapinda muroom mangu ndokubva ndadya zvangu. Handina kupedza since chikafy chako chainge chakawanda ndokubva ndaisa hangu muFridge, handina kumbofunga kuti mu Indian uya angauya but pasina 1 hour ndakanzwa knock ndikati ndiyani zvikanzi Candice.
Ndakashaya kuti Candice ndiyani coz ndainge ndisingazive zita rake, ndakayenda kunovhura door ndiwone kababe kaye zvikanzi I came to get Nandos yangu that you promised. Chakandishamisa manje ainge achinja apfeka kamwe ka skirt kairatidza zvidya zvese panze , ndakaita kunge ndarohwa nemagetsi coz mboro yangu yakabva yamira futi apa ndainge ndakufara kuti yainge yakurara. Semunhu ainge atandara hake ndainge ndapfeka kashort kadiki and nekukura kwainge kwakaita mboro yaitowoneka kuti yamira, ndakapinda busy ndichizama kuvhara kuti Candice asazviwone but nekaskirt kainge akapfeka anenge aitoda zvekusvirwa kwete zve Nandos.
Candice akabva ati handichada Nandos ndakuda sausage, ndakati handina any sausage muno zvikanzi ndaiwona yakadongorera mubhurugwa mako. Ndainge ndisingade but pfungwa dzaikurirwa kufunga nemboro, masasi iwe Candice akapfugama pamberi pangu ndokubva azvomora mboro yangu ndokubva yanzi mumuromo bvoooo, aaahh ahhh ndakashaya zvekuita kana pekubata and nekudziya kwaiyita mumuromo imomo ndakashaya zvekuita ndiye tsaaa tsaaa tsaaa ndichitundira mumuromo make and aitonanzvirira kuita kunge munhu arikudya huchi.
Candice akaramba achiyamwa mboro yangu kusvikira ndakuinzwa ichitanga kumuka zvishoma nezvishoma apa irimumuromo imomo, ndakazoti ndichibata beche rake ahhh kana azviitira weti haaitota sekudaro. Ndakati ndakabata ndokubva ndamufongoresa pasofa beche richibva raita kuuya kumashure ndokuiti shweeee, ndakanzwa mwana akaiti tetsu mhere zvikanzi wandiuraya kani mboro yako inonaka kani akayuwira achiita chikapa zvekuti akabva atunda achiridza mhere apa ndainge ndakutya kuti manext door vakazvinzwa vachaudza babe rangu luckily ainge ari masikati zvekuti pandikapedza kukasvira kakabva kati ndichauya manheru kuzotora Nandos. Candice akazoyenda kuroom kwake achiita kugamhina but paakadzoka manheru akauya neshamwari yaye zvikanzi ndirikuda kuti undisvirewo sezvawaita Candice, inini ndinonzi Claire.
Ndichakuudzai mazvamburiro andakaita Claire nemboro akatanga kugwinha gwinha …. PART 2
END OF PART ONE – COMMENTS WELCOME PLEASE
Celebrating Man United win nenyoro – Confessions of a Single Mother
Tete: Ndinonyara kuudza murume kuti ndinoda kuiswa most times, even masikati!
Previous articleTete: Ndinonyara kuudza murume kuti ndinoda kuiswa most times, even masikati!
Next articleBamunini vakandizvambura nyoro kupfuura zvandinoitwa nemurume wangu!